RIYADH, Saudi Arabia - Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa magaalada Riyadh ee xarunta dalka Sucuudiga uga qeyb galay shirka Wasiirrada Gaashaandhigga ee isbahaysiga la-dagaalanka argagixisada.
Waxana kulankani ka qeyb galaya in ka badan Afartan waddan, iyadoona diiradda lagu saaray dhibaatada ay kooxaha argagaxisada ah ku hayaan dalalka Islaamka.
Mudane Khadar ayaa ka warbixiyay dhibaatada Al-shabaab ku hayso shacabka Soomaaliyeed, isagoo soo qaatay qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho oo ku naf-waayeen shacab aan waxba galabsan iyo sidoo kale qaraxii bishan ka dhacay dalka Masar.
Wafdiga Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa kamid ah La-taliyaha Madaxweyne ee arrimaha ciidamadda Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac iyo saraakiil sare oo ka tirsan Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Sacuudiga ayaa lagu eedeeyay inuu mas'uul ka yahay geerida in ka badan 14 kun oo qof...
Caalamka 16.12.2017. 18:07
Madaxweynaha Eritrea oo Abu Dhabi kulamo kula leh madaxda UAE
Caalamka 20.09.2018. 19:53
Abiy Axmed iyo Afwerki oo siixay Heshiis, lana gudoonsiiya Bilad qaali ah
Afrika 16.09.2018. 23:49